Iwate စီရင်စုရဲ့ မြင်းလှည့်လည်ပွဲ Chagu Chagu Umakko Festival - JAPO Japanese News
ကြာ 17 Jun 2021, 11:41 မနက်
2021ခုနှစ်6လပိုင်း 12 ရက်နေ့ (စနေနေ့) ကကျရောက်ခဲ့တဲ့ Chagu Chagu Umakko Festival
Chagu Chagu Umakko Festival ဆိုတာ ဇွန်လရဲ့ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
A city of strength လို့တောင် တင်စားထားတဲ့ Iwate ခရိုင်ရဲ့ Morioka မြို့ဟာ ဇွန်လကိုရောက်လာတိုင်း ပွဲတော်ရဲ့ ဆည်းလည်းသံက တညံညံဖြင့်လွှမ်းခြုံလို့နေပါတယ်။
ထိုပွဲတော်မှာ မြင်းအကောင်ရေ ၁၀၀ ကို ရောင်စုံလှပဆန်းကြယ်တဲ့ မြင်းကကြိုးနဲ့ခေါင်းလောင်းများဖြင့် တန်ဆာဆင်ပြီး Takizawa ကနေ Morioka အထိ စီတန်းလှည့်လည်လေ့ရှိပါတယ်။
ရှေးအချိန်ကာလကတည်းက Iwate စီရင်စုဟာ မြင်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းနဲ့ကျော်ကြားတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Chagu Chagu Umakko Festival ကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ကစတင်ခဲ့တယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အလွန်ပင်ပန်းခဲ့တဲ့စပါးစိုက်ပျိုးချိန်ပြီးနောက် မြင်းတွေကို ၁ ရက်အနားပေးခြင်းနဲ့၊ ၎င်းတို့ကျန်းမာစွာဆက်ရှိနေဖို့ နတ်ကွန်းမှာသွားရောက်ဆုတောင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
မြင်းတွေဟာ Takizawa ရဲ့ Onikoshi Sozen နတ်ကွန်းကနေ, Morioka ရဲ့ Hachiman နတ်ကွန်းဆီသို့ ဦးတည်ထွက်ခွါပါတယ်။ ထူးဆန်းတာကတော့ Onikoshi Sozen နတ်ကွန်းဆိုတာ မြင်းတို့ရဲ့နတ်ဘုရားကိုရည်စူးထားတဲ့ နတ်ကွန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲတော်တစ်လျှောက် ဆည်းလည်းသံတွေဟာ မြို့တစ်ခွင်ကိုလွမ်းခြုံထားတယ်။
မြင်းတွေခြေလှမ်းလှမ်းတိုင်းမှာ ၎င်းတို့ပေါ်ကခေါင်းလောင်းသံတွေက “ chagu chagu” လို့မြည်ပါတယ်။
မြင်းတစ်ကောင်မှာ ဆည်းလည်းပေါင်း ၇၀၀ ကိုဆင်မြန်းပေးထားပါတယ်။
အားလုံးထဲမှာ အထူးခြားဆုံးခေါင်းလောင်းကတော့ ၎င်းတို့လည်ပင်းမှာဆွဲထားပေးတဲ့ ဒိုးနပ်ပုံစံခေါင်းလောင်းဖြစ်ပြီး, မူလအားဖြင့်ဒါကို ဝံပုလွေရန်ကနေကာကွယ်တားဆီးတဲ့နေရာမှာ သုံးခဲ့ကြပါတယ်။
သင်ဟာဒီပွဲတော်နဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့ရင်တော့ အောက်ပါ (၂) ချက်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
၁။ မြင်းများကိုမုန်လာဥနီကျွေးခြင်းနှင့် အမှတ်တရဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်း
၂။ ၎င်းတို့ကိုယ်ပေါ်က အရောင်အသွေးစုံလင်လှသော ထူးဆန်းဖွယ်ဝတ်ရုံများနှင့် ခေါင်းလောင်းများအား ရှုစားနိုင်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သတိထားရမှာကတော့ မြင်းရဲ့အနောက်မှာသွားမရပ်မိပါစေနဲ့ …
ဒီအပြင် လျှပ်တစ်ပြက်မီးရောင်ထွန်းခြင်း၊ ကျယ်လောင်တဲ့အသံပြုလုပ်ခြင်း စတဲ့အချက်တွေက ၎င်းတို့ကိုလန့်သွားစေတဲ့အတွက် မလုပ်မိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီပွဲတော်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ သင်ဟာ Iwate ဥယျာဥ်က Hachiman နတ်ကွန်း ဒါမှမဟုတ် Morioka မြို့ရဲ့ ရှုခင်းများထဲကတစ်ခုကို လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Morioka ဘူတာကိုသွားတဲ့ Tohoku ကျည်ဆန်ရထားကိုစီးရမှာဖြစ်ပြီး၊ အဲ့ဒီကနေပွဲတော်နေ့မှာ အထူးပြေးဆွဲတဲ့ ဘူတာရှေ့ terminal 16 မှာရှိတဲ့ ဘတ်စ်ကားကိုစီးသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Online ကနေကျင်းပနိုင်မယ့် နွေရာသီပွဲတော်အတွက် Surisawa ဒေသ ပြင်ဆင်နေပြီး !!!
စည်ကားလှတဲ့ Aomori Nebuta ပွဲတော်ကြီး
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပခဲ့တဲ့ မြန်မာပွဲတော်
လာမယ့်နှစ် “ Sapporo နှင်းပွဲတော်” မကျင်းပဖြစ်တော့ပါ။
မျိုးဆက်သစ်ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ အလန်းဆုံးနည်းပညာ ！
ယာကူဇာတို့ရဲ့ လက်ထိပ်ဖြတ် တောင်းပန်နည်း !!!
Mask တပ်ထားတဲ့ဝက်ဝံပုံစံ စပါးခင်း !!!!
Valentine = chocolate ပေးသောယဥ်ကျေးမှု (သို့မဟုတ်) ကောင်မလေးဟာ ကောင်လေးကိုဖွင့်ပြောသောနေ့ !!!!
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်း၊ ၂၄နှစ်အရွယ် အိမ်ခြေမဲ့အမျိုးသမီးလေး…
တကယ်က လူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လက်တွေ့စမ်းသပ်တဲ့ အကြံအစည်တစ်ခုသာဖြစ်နေခဲ့…
ယခင်က ဂျပန်နိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ပန်းဟာ ဆာကူရာမဟုတ်ခဲ့ပါ !!!
Kabukicho က ၁၉ နှစ်အရွယ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ကောင်မလေး
အလိမ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေက အဆင်ပြေရဲ့လား ? ?
အရှေ့အာရှမှာ ကိုရိုနာကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက် နည်းပါးရတဲ့အကြောင်းရင်းက လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀၀ မှာရှိနေခဲ့တာလား！？